विप्लवको ‘महापतन’मा बादल-पम्फाको लभ स्टोरी, दुईजनाबीच यसरी झाङ्गियो प्रेम — Sanchar Kendra
विप्लवको ‘महापतन’मा बादल-पम्फाको लभ स्टोरी, दुईजनाबीच यसरी झाङ्गियो प्रेम
माओवादी पार्टी र आन्दोलनमा प्रचण्ड र बादलबीचको सम्बन्ध पनि असामान्य खालको उतार–चढावपूर्ण छ । उनीहरूजत्तिको नजिक सम्बन्ध पनि कसैको भएन भने तिक्तता र प्रतिद्वन्द्विताको पनि कुनै सीमा रहेन । उनीहरूको बुझाइ क्रान्तिलाई निष्कलङ्कपूर्ण तरिकाले पूरा गर्नेभन्दा पनि परोक्ष–अपरोक्ष रूपमा आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी केन्द्रमा राख्ने र अर्कोलाई हतोत्साहित र कायल पार्ने खालको बढी रह्यो । उनीहरूको निकटतालाई तोड्न राजनीतिक आन्दोलनको प्रवाह र उनीहरूभित्र मौजुद आशङ्कापूर्ण सम्बन्ध काफी थियो भने कटुता र प्रतिशोधपूर्ण सम्बन्धमा पुग्न पार्टी्भित्रका अनेकौँ शक्ति, प्रवृत्ति एवम् प्रतिनिधि पात्रहरूको विविध सम्बन्ध र गतिविधिहरूले काम गरिरहेका हुन्थे । कतिले उत्तेजित पार्न सहयोग गर्थे भने कतिले सन्तुलित गर्न सहयोग पुर्‍याउँथे ।
उनीहरूको कटुता कहाँसम्म पुग्थ्यो भन्न सकिने अवस्था थिएन किनकि प्रचण्डले बादललाई लिनप्याओको आरोप थोपरिसकेका थिए । लिनप्याओ भनेको हत्या गर्नेसम्मको प्रवृत्ति हो र त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने हुन आउँथ्यो । बादलले पनि प्रचण्डलाई होक्जाको संश्लेषण गरेका थिए । एकपटक त नामै ‘लखन’ पनि राखे । त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ प्रचण्डलाई जङ्गबहादुर भन्नु र त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्छु भन्ने थियो । यसरी हेर्दा पार्टी्भित्र प्रचण्ड–बादल सम्बन्धले पनि माओवादी आन्दोलनलाई आजको स्थानसम्म पुर्या‍उन भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
बादल कारबाहीमा परेको तीन वर्ष भइसकेको थियो, पाँचौँ विस्तारित बैठकपछि जतिबेला बाबुराम–प्रचण्डको सङ्घर्ष चर्केको थियो, बादललाई कारबाही फुकुवा भयो । पम्फालाई भने अझै परीक्षणमा राखियो । बादल पार्टीमा फर्केपछि क्षेत्रीय ब्युरोबाट काम थाले तर प्रचण्डलाई बादलको तनाव जहिले पनि रह्यो । घरि देशभित्र, घरि देशबाहिर लतार्ने कार्य चलिरह्यो । बादलले पनि आफ्ना कुरा माथिल्लो स्तरमा राख्न छोडेनन् । बाबुरामसँगको सङ्घर्षले गर्दा बादललाई प्रचण्डसँग सहकार्यमा फर्किन केही सजिलो भयो तर भारतको रोहबरमा प्रचण्ड–बाबुरामको एकता भएपछि ‘प्रचण्डपथ’ को संश्लेषण भयो । रमाइलो संयोग र व्यवस्थापन भनौँ, ‘प्रचण्डपथ’ को गाँठो बादलले पारेका थिए ।
त्यस बेला अरू शब्दहरूमा संश्लेषण गर्ने बहस थियो । कसैले प्रचण्डद्वारा नेतृत्व गरिएको पार्टी विचार, कसैले पार्टीको निर्देशक विचार, कसैले प्रचण्ड विचार, कसैले प्रचण्ड विचारधाराको बहस गरिरहेका थिए तर यी सबै शब्दमा प्रचण्ड आफैँ जोडिएका थिए । नयाँ पिँढीले संश्लेषणलाई आवश्यक ठानेको थियो र त्यो सही पनि हुन्थ्यो तर शब्द के भन्ने भने फरक विषय थियो । पछि थाहा भयो, प्रायः पुराना पिँढीका नेताहरू यसखालको संश्लेषणमा सहमत थिएनन् तर भन्ने आँट कसैको थिएन, बरु मुखमा बुट्टा भर्नमै समय खर्चिने भयो । यो कुरा पछि पार्टी फुटेपछि देव गुरुङले खोलेका थिए– ‘प्रचण्डपथ’ संश्लेषण गर्दा त ‘म र सीपी गजुरेल अर्को कोठामा गएर सिरकले टाउको छोपेर रोयौँ । पार्टी समाप्त भयो भन्यौँ भनेर ।’ उनले कतिसम्म त्रास भएको बताए भने त्यहाँ पनि कसैले सुन्लान् कि भन्ने चिन्ता थियो, बिचराजस्तो !
बेङ्लोरबाट फुन्टिबाङ हुँदै लाबाङसम्म पुग्दा सङ्घर्षको मोर्चा नै उलटफेर भयो । बादलबाट उग्ररूपले बाबुरामतिर सरे । जब चुनबाङमा बाबुराम–प्रचण्डको एकता भयो त्यसको घानमा बादलको लिनप्याओवादले पनि मुक्ति पायो । कारण के थियो भने बाबुराम र प्रचण्ड लगनगाँठो पारेर फर्किएका थिए । लाबाङमा खाल्डो खन्ने र विद्रोह गर्ने भन्नेसम्मको सङ्घर्ष चुनबाङमा पुग्दा एकअर्कोलाई प्रशंसैप्रशंसा बर्साउनेमा बदलिएको थियो ।
बाबुराम प्रचण्डलाई भन्दै थिए- २१ औँ शदीको ‘लेनिन’ जस्तो लाग्छ अनि प्रचण्ड बाबुरामलाई भन्दै थिए– दक्षिणएसियाकै मेधावी र बौद्धिक नेता ! यसो भनेपछि त बाबुराममाथि लाबाङमा लगाएको आरोप निकाल्नुपर्‍यो तर निकाल्ने कसरी ! त्यही मौकामा बादलको लिनप्याओवादले बिदा लियो तर प्रचण्डको भित्री इच्छा बादलको लिनप्याओ नहटे हुन्थ्यो, कुनै न कुनै रूपमा रहे हुन्थ्यो तर परिस्थितिले त्यो सम्भव रहेन । प्रचण्ड नै लिनप्याओ पनि हटाऔँ भन्नेमा गए । यसले बादलको दिमागमा रहेको गह्रौँ बोझ हल्का भयो । बाबुरामको भन्दा पनि बादलको आरोप खारेजमा केन्द्रीय समिति खुसी देखिन्थ्यो । चुनबाङमा बादलले प्रचण्डसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे मनका बह पोख्दा केन्द्रीय समिति नै भावुक बन्यो । उनी भन्दै थिए, ‘म सिपाही कमान्डर बन्न खोजेँ, म जग टावर बन्न खोजेँ । म सहयोगी जित्न खोजेँ, म मेरो प्यारो नेतासँग अङ्कमाल गर्न चाहन्छु ।’
शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि प्रचण्डमा वैचारिक–राजनीतिक विचलनका समस्याहरू देखिन थाले । किरण जेलबाट छुटेपछि प्रचण्डसँग अन्तर्सङ्घर्ष सुरु भयो । बालाजुमा कार्यशैलीगत कमजोरीबारे आलोचना हुँदा बैठक कक्षको ७० प्रतिशत मत आलोचनाका पक्षमा देखियो । बादललाई पनि कतै न कतै समस्या महसुस भएको थियो । खरीपाटी भेलामा पुग्दा प्रचण्डसँगको सङ्घर्ष राजनीतिक विचारमा परिसकेको थियो । त्यसमा बादल बीचमा बसे । जब बहस पालुङटार हुँदै धोबीघाटतिर मोडियो, बादल प्रचण्डको विचलनविरुद्ध उभिन पुगे । उनीभित्र प्रचण्डप्रतिको घृणा प्रस्ट देखियो ।
२०६९ सालमा पुग्दा बादल प्रचण्डका विरुद्ध सङ्घर्षमा उभिए । त्यसले पार्टीमा निकै ठूलो प्रभाव पा¥यो पनि । उनले प्रचण्ड–बाबुरामलाई एउटा भावमा ‘लालगद्दार’ पनि भने र देशैभरि प्रचार पनि भयो । उनले प्रचण्डविरुद्धको सङ्घर्षमा नेतृत्व नै त गरेनन् तर सशक्त भूमिका भने पूरा गरे । सम्भवतः प्रचण्डलाई बादलले एकपटक आफूविरुद्ध विद्रोह गर्ने अनुमान थियो । उनले सुरुमा केही जोड बादललाई फकाउने गरे पनि पछि त्यति मतलब गरेनन् । पार्टीमा विद्रोह भएर किरणको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी बनेपछि प्रचण्ड-बादलको जीवनभरको सहकार्य जो निकै भावना र कटुताले भरिएको थियो, समाप्त भयो । बादल नेकपा–माओवादीका महासचिव भए ।